News - Airwoods HVAC: Bandhigga Mashaariicda Mongolia
Airwoods waxay ku guuleysatay in ka badan 30 mashruuc oo ku yaal Mongolia. Oo ay ku jiraan Bakhaarka Waaxda Gobolka Nomin, Tuguldur Center Shopping, Hobby International School, Sky Garden Residence iyo inbadan.
Waxaan haynaa in ka badan 50 farsamoyaqaano khibrad leh oo ku takhasusay HVAC iyo naqshadaynta qolka nadiifinta ee loogu talagalay dalabka warshadaha kala duwan. Sannad kasta, waxaan dhameystirnaa in ka badan 100 mashruuc oo dalal kala duwan ka socda. Kooxdayadu waxay ku siin karaan xalal dhammaystiran HVAC oo ay ka mid yihiin la-taliyaha mashruuca, qaabeynta, qalabaynta qalabka, rakibaadda, tababarka, dayactirka, iyo xitaa mashaariicda loo yaqaan 'turnkey' si loogu habeeyo baahiyaha macaamiisha kala duwan.
Waxaan si xirfad leh u soo saarnaa hawo-qaboojiyeyaasha soo-kabashada tamarta iyo waxyaabaha nadiifinta hawada. Waxaan bixinaa feejignaan ku saabsan faahfaahinta sheyga oo waxaan leenahay baahiyo tayo aad u adag. Alaabtayadu way ka gudubtay imtixaanka CE iyo RoHS. Waxaan u fidinaa adeegga ODM noocyo badan oo caan ah oo heer caalami ah. Badeecad kasta oo naga mid ah ayaa la tijaabiyaa oo si taxaddar leh loo buuxiyaa ka hor inta aan loo gudbin macaamiil kasta. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyay in kabadan 100 wadan. Kobaca iibka sanadlaha ah ayaa ka badan 50%.
Fadlan hoos ka eeg qaar ka mid ah tixraacyada mashruuca ee lagu dhammeeyey Mongolia.
Magaca Mashruuca: Bakhaarka Waaxda Gobolka ee Nomin
Codsiga: Xarunta Dukaameysiga
Goobta: Ulaanbaatar, Mongolia
Product: AHU & Qiiqa Sanduuqa
Magaca Mashruuca: Tuguldur Shopping Center
Magaca Mashruuca: Hiwaayadda Caalamiga ah ee Dugsiga
Codsi: Dugsiga Gaarka loo Leeyahay K-12
Product: AHU & Xakamaynta
Magaca Mashruuca: Urgoo IMAX Shineemo
Codsiga: Xarunta Shangri-La IMAX
Magaca Mashruuca: Buugaagta Internom
Codsiga: Buugaagta buugaagta
Magaca Mashruuca: Deggenaanshaha Beerta Sky
Codsi: Kondhomiyam raaxo leh
Waxsoosaarka: Waxyaabaha hawada ka duulaya
Magaca Mashruuca: Tom N Toms Coffee
Codsi: Dukaan Kafee ah